UMnuDarkRX Apk Landa i-Free For Android [Isibuyekezo sakamuva]
Posted: Kwangathi 20, 2021 Kwangathi 31, 2021
IGarena Free Fire ingenye yemidlalo ehola phambili yezingcingo ze-Android. Esihlokweni sanamuhla, sinethuluzi lokuxhasa i-MrDarkRX labalandeli be-FF. Ngakho-ke, sizobuyekeza lolu hlelo lokusebenza esihlokweni sanamuhla.
I-MrDarkRX Free Fire uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi usebenzise izinhlobo eziningi zezici zokushintshwa kugeyimu. Ngakho-ke, kukusiza ukuthi udlale lo mdlalo kalula futhi ususe ngisho nabadlali be-pro ngaphandle komzamo omkhulu.
UMnu Dark RX yithuluzi elisha elakhelwe ukuphatha izihlungi ezintsha zokuphepha zomdlalo. Izinhlelo zokusebenza zangaphambilini azisebenzi noma lezo ziphelelwe yisikhathi. Ngakho-ke, udinga le Menyu entsha ye-MrDarkRX Mod.
Ungayisebenzisa Kanjani Imenyu ye-MrDarkRX Mod?
I-MrDarkRX isicelo seGarena Free Fire esikuvumela ukuthi ushintshe umdlalo. Empeleni kukwenza ukwazi ukuzuzwa ngokugcotshwa okukhona kulo mdlalo. Yilesi sizathu esenza ukuthi ibe nezigidi zabalandeli abavela kuwo wonke umhlaba. Uma unentshisekelo, ungathola futhi nezinsizakalo zawo mahhala.
Ungase uzwe ngezinhlelo zokusebenza zeMod Menu yeFF noma i-PUBG. Ngakho-ke, iyiMenyu ye-ModDarkRX Mod evumela ukuthi unikeze amandla izinhlobo ezahlukene zezindlela ongazisebenzisa kumdlalo. Kunenombolo enkulu yezinketho ezifana nesilinganiso sokulimala okuphezulu, i-wallhack, i-Antena View, ne-Auto Headshot noma i-Auto Aim.
Lokhu kwesinye isikhathi kuyatholakala kuzinhlelo zokusebenza zeMod Mod. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zama-ESP ezikuvumela ukuzwa noma ukuqagela izinhlobo ezahlukene zezinto. Noma kunjalo, ungakwenza lokho kalula kepha akunasiqiniseko sokuthi ukuqagela kwakho kulungile noma akulungile. Kepha leli thuluzi kukusiza ukuba uqagele noma uzwe ngokunembe.
Kunezinketho eziningi kakhulu oyokwazi ngazo ngemuva kokuzisebenzisa ocingweni lwakho. Ngakho-ke, ngincomela nina bafana ukuthi nifunde le ndatshana kuze kube sekupheleni uma ufuna ukwazi ukuthi isebenza kanjani noma ukuthi ungayisebenzisa kanjani. Ngaphezu kwalokho, ubuye wazi ukuthi kuphephile ukusebenzisa noma cha amadivayisi.
Kodwa ngaphambi kwalokho, kufanele ulande i-Apk bese uyifaka kumafoni akho. UMA ungazi ukuthi ungalusebenzisa noma ululande kanjani uhlelo lokusebenza, kuzodingeka ukuthi ufunde le ndatshana kuze kube sekupheleni. Ngaphezu kwalokho, ngabelane ngenguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza lapha kuleli khasi kuma-Smartphones akho namathebulethi e-Android.
Usayizi 92.99 MB
Igama lephakheji com.dts.umlilo womlilo
Ukuze usebenzise lolu hlelo lokusebenza leselula, udinga ukulanda bese ufaka i-MrDarkRX Apk yezingcingo namathebulethi akho e-Android. Ngakho-ke, ngemuva kwalokho, uzokwazi ukusebenzisa uhlelo lokusebenza kahle. Ngakho-ke, lapho ekugcineni kwaleli khasi, uzothola isixhumanisi se-Apk. Lokho kumahhala futhi azikho izici zeprimiyamu.
Ukufaka ifayili lephakeji kufoni yakho, udinga ukunika amandla okukhethwa kukho kwemithombo engaziwa kusukela kuzilungiselelo zokuphepha. Lolu hlelo lokusebenza oluvela eceleni ukuze ama-Android angavumeli imithombo evela eceleni ukufaka izinhlelo zokusebenza. Uma usuqedile ngalokho, ungakufaka kufoni yakho kusuka kwisitoreji.
Manje qala uhlelo lokusebenza bese ufaka igama lomsebenzisi nephasiwedi etholakala lapha ngezansi. Ukuyigcina iphephile futhi ivikelekile kuwe, unjiniyela ungeze inketho yokungena ngemvume ngakho-ke udinga ukufaka igama lomsebenzisi nephasiwedi enikezwe ngezansi. Kufanele ukopishe unamathisele lezi ziqinisekiso zokungena noma uthayiphe njengoba zinjalo.
Igama lomsebenzisi: ItzMrDarkRX
Uma usebenzisa uhlelo lokusebenza ngokwemvelo kungenzeka ukuthi kuphephile kuwe nama-akhawunti wakho wemidlalo. Kepha uma uyisebenzisa ngendlela abaphikisi abangaqagela ngayo ukuthi usebenzisa i-ESP, akuphephile wena. Ngakho-ke, kusho ukuthi kuncike ekusetshenzisweni kwakho. Kepha inikeza isici se-Anti Ban.
Abantu futhi bafuna lezi zinhlelo zokusebenza ezifanayo.
I-Sensibilidade FF Pro Apk
Kukhona amathani wezinhlelo zokusebenza ezifanayo kule webhusayithi Apkshelf. Ngakho-ke, uma usukulungele ungalanda kalula lezo zezingcingo zakho. Kodwa-ke, uma ufuna ukuthola i-MrDarkRX ungakwenza lokho kusuka kuleli khasi. Sebenzisa isixhumanisi sokulanda esingezansi ukuthola ifayili lephakheji bese ulifaka kufoni yakho.
Posted in Imidlalo, AmathuluziUmake Mnu Mnyama RX, MrDarkRX, MnuDarkRX Apk, I-MrDarkRX Fire Free, Imenyu ye-MrDarkRX Mod
9 imicabango on “UMnuDarkRX Apk Landa i-Free For Android [Isibuyekezo sakamuva]"
Septhemba 1, 2020 at 2: 48 am
Okthoba 23, 2020 ku-12: 04 pm
Iam mahhala umlilo hake
Disemba 13, 2020 ku-2: 10 pm
Ifayela lephasiwedi ye-Minta nya
January 18, 2021 at 10: 22 pm
February 22, 2021 at 9: 47 am
UMr Dark rx
April 8, 2021 ku-1: 22 am
Prahit Nunisa uthi:
Apreli 9, 2021 at 1: 28 pm
I-hack yamahhala yomlilo enjalo mai
[i-imeyili ivikelwe] uthi:
April 23, 2021 ku-5: 20 am
EstÃ¡ AplicaciÃ³n me gusta muchÃsimo gracias